DB Cooper dia ny haino aman-jery epithet malaza ampiasaina mba hilazana ny tsy fantatra lehilahy keriny ny Boeing 727 fiaramanidina ao amin'ny airspace eo Portland, Oregon, sy Seattle, Washington, tamin'ny Novambra 24, 1971, extorted $ 200.000 ao amin'ny vidim-panavotana (mitovy amin'ny $ 1,170,000 in 2015) , ary parachuted ho hafahafa anjara. Na dia teo aza ny lehibe sy foana fihazana olombelona amin'izany FBI fanadihadiana, ny niharamboina tsy mbola hita na fantatra tsara. Ny raharaha mitoetra irery no voavaha rivotra piraty Amerikanina fiaramanidina tantara.
Ny ahiana ny airline nividy tapakila mampiasa ny antsoina Dan Cooper, fa noho ny haino aman-jery vaovao miscommunication dia lasa fantatra amin'ny lore malaza toy ny "D. B. Cooper". -Jatony Leads no nanenjika ao ireo taona nanaraka, nefa tsy nisy porofo kevitra mbola nipoitra ny marina momba Cooper maha na ny toerana. Maro be teoria ny plausibility samihafa no nanolo-kevitra ny manam-pahaizana, mpanao gazety, sy ny mpankafy mafana fo. Ny fahitana ny kely vola taratasy cache ny vidim-panavotana tamin'ny 1980 Niteraka indray liana ihany, fa amin'ny farany lalina ny zava-miafina, ary ny ankamaroan'ny mbola unrecovered ny vidim-panavotana.
Raha FBI naman'ny Fiangonana efa nilaza hatrany am-piandohana izay Cooper mety tsy velona ny mampidi-doza nitsambikina, ny fahafahana misafidy raharaha mitana mavitrika rakitra-izay dia nitombo ho maherin'ny 60 boky-ary mbola mangataka famoronana hevitra sy vaovao Leads avy amin'ny vahoaka. "Angamba ny hydrologist Afaka mampiasa ny farany teknolojia ny mamantatra ny $ 5.800 ao amin'ny vidim-panavotana vola hita tamin'ny 1980 ny toerana Cooper tafatody manokana eo ambony," hevitra Special Agent Larry Carr, mpitarika ny fanadihadiana ekipa hatramin'ny 2006. "Na mety olona fotsiny mahatsiaro fa hafahafa dadatoany. "
Ny zava-nitranga nanomboka tamin'ny tapaky ny volana-tolakandro Thanksgiving Eva, November 24, 1971, ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Portland Oregon. Ny lehilahy mitondra raharaha attaché mainty nanatona ny sidina latabatra ny Avaratra Orient Airlines. Izy nampahafantatra ny tenany ho "Dan Cooper", ary nividy ny iray-lalana tapakila tamin'ny Flight 305, ny 30 minitra nankany Seattle, Washington.
Cooper niakatra ny fiaramanidina, ny Boeing 727-100 (Faa N467US fisoratana anarana), ary naka seza 18C (18E iray tantara, 15D hafa) ao aoriana ny mpandeha efitra. Ary nampirehitra sigara, ary nandidy ny Bourbon sy ny soda. Vavolombelona nanatri-maso tao an-tsambo nampahatsiahy ny olona araka ny tapaky ny volana-forties, eo anelanelan'ny 5 tongotra 10 santimetatra (1.78 m) sy 6 tongotra 0 santimetatra (1.83 m) ny haavony. Nitafy mainty maivana lamba tsy lena, loafers, maizina palitao, ny borosy nanery collared fotsy lobaka, ny mainty necktie, sy ny reny ny perla tie Pin.
FBI Te peta-drindrina ny D. B. Cooper
Flight 305, eo ho eo ny iray-feno fahatelo, nanala amin'ny fandaharam-potoana amin'ny 2:50 ora hariva, ora ao an-toerana (PST). Cooper nandalo ny taratasy ho any Florence Schaffner, ny sidina mpanompo toerana akaiky indrindra ho azy tao amin'ny seza Hanketo mifatotra ho any amin'ny aft stair varavarana. Schaffner, mihevitra ho manana ny taratasy iray irery ao ny telefaonina mpandraharaha maro, nandatsaka izany potsiny ao an-kitapom-bola. Cooper niankina nanatona azy ary nibitsibitsika, "Miss, ianao tsara kokoa Te hijery izany taratasy. Manana baomba."
Ny taratasy natao pirinty tany madio sy milamina, rehetra-sora-baventy tamin'ny tsapan'ny penina. Hoy izany, eo ho eo, "Izaho dia manana baomba ao amin'ny kitapo. Izaho no hampiasa azy io raha ilaina. Tiako ho mipetraka anilako. Ianao hoe-keriny." Schaffner dia nanao araka izay nangatahiny, dia moramora nangataka hahita ny baomba. Cooper vaky nisokatra ny kitapony mbola ampy ho azy mba hahatakaranao an valo mena cylinders ( "efatra teo an-tampon'ny efatra") mifatotra amin'ny tariby mifono amin'ny mena insulation, ary ny lehibe cylindrical bateria. Taorian'ny fanakatonana ny kitapo, dia nanonona ny fangatahana: $ 200.000 ao amin'ny "negotiable Amerikana vola"; parachutes efatra (roa Kilonga sy roa piarovana); ary ny solika fiara nitsangana teo andaniny avy tany Seattle mba refuel ny fiaramanidina eo rehefa tonga. Schaffner nampita ny toromarika Cooper ho amin'ny cockpit; Rehefa niverina izy, dia manao maizina Sunglasses.
Ny mpanamory, William Scott, nifandray Seattle-Tacoma Airport fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka, izay kosa nampahafantatra an-toerana sy ny manam-pahefana federaly. Ny 36 mpandeha hafa dia nilaza fa ny nahatongavany tao Seattle ho tara noho ny iray "tsy ampy taona olana mekanika". Northwest Orient ny filoha, Donald Nyrop, alalana fandoavana ny vidim-panavotana, ary nandidy mpiasa rehetra mba hiara-miasa tanteraka amin'ny hijacker. Ny fiaramanidina nasianao boribory Puget Sound ho adiny roa eo ho eo mba hamela Seattle polisy sy ny FBI fotoana hivory ny parachutes Cooper sy ny vidim-panavotana-bola, ary ny fanentanana vonjimaika mpiasa.
Schaffner nampahatsiahy fa niseho Cooper tsara ny eo an-toerana ny lalana; Nisy fotoana hoy ny fanamarihany: "Toa Tacoma midina any ianareo," toy ny fiaramanidina nanidina ambony izany. Ihany koa izy nilaza, marina, fa McChord Air Force Base ihany ny 20 minitra fiara avy any Seattle-Tacoma Airport. Schaffner nilaza azy ho tony, mahalala fomba, ary tsara-teny, tsy mety mifanaraka ny fitsaratsaram-poana (romotra, mafy fo mpanao heloka bevava na "maka-aho-to-Kiobà" mpanohitra ara-politika) malaza mifandray amin'ny rivotra piraty tamin'izany fotoana izany. Tina Mucklow, fiaramanidina iray hafa mpanampy, nanaiky. "Tsy izy anefa no natahotra," hoy izy nilaza naman'ny Fiangonana. "Toa izy fa tsara. Izy tsy mifaditrovana na nasty. Voahevitra izy sy hampitony ny fotoana rehetra." Nandidy ny faharoa sy ny rano Bourbon, nandoa ny zava-pisotro vakizoro (ka nanizingizina Schaffner mitandrina ny fiovana), ary nanolo-tena mangataka sakafo ho an'ny mpiasa amin'ny fiaramanidina mandritra ny fijanonana any Seattle.
FBI mpiasan'ny novoriny ny vidim-panavotana vola avy amin'ny maro Seattle-faritra banky-10.000 unmarked 20-dolara vola taratasy, maro amin'ny serial isa manomboka amin'ny taratasy "L" Midika famoahana ny Federaly Reserve Bank ny San Francisco, indrindra mitondra "Series 1969-C "fanendrena, ary nanao sary horonan-tsary bitika avy isan-olona izany. Cooper nandà ny miaramila-olana parachutes voalohany natolotry ny manam-pahefana, fa tsy mitaky sivily parachutes amin'ny tanana niasa ripcords. Seattle nahazo azy ireo mpitandro filaminana avy amin'ny sekoly skydiving an-toerana.
Tamin'ny 5:24 PM Cooper dia nanambara fa ny fitakiany efa nihaona, ary tamin'ny 5:39 ora hariva ny fiaramanidina niantsona tao Seattle-Tacoma Airport. Nandidy Cooper Scott mba fiarakaretsaka ny fiaramanidina ho any mitokana, misy jiro mamirapiratra fizarana ny Lalantara sy hamono fanazavana eny amin'ny trano fialan-tsasatray mba hahakivy polisy mpitily. Northwest Orient ny Seattle asa mpitantana, Al Lee, nanatona ny fiaramanidina eny an-dalana akanjo (mba tsy ny mety izay Cooper mety diso ny airline fanamiana noho ny an'ny mpitandro filaminana) dia natolony ny vola-feno knapsack sy parachutes ho Mucklow alalan'ny ny aft tohatra. Raha vao vita ny lahateny dia navela Cooper mpandeha rehetra, Schaffner, ary ambony fiaramanidina Alice Hancock mba handao ny fiaramanidina.
Nandritra refueling Cooper ny voasoritra ny fiaramanidina drafitra ho amin'ny cockpit naneno: Mazava ho azy fa ny atsimo atsinanana mankany Mexico City amin'ny kely indrindra azo atao tsy stalling airspeed ny fiaramanidina-100 eo ho eo fatotra (190 km / h, 120 mph) -any ny ambony indrindra tongotra 10.000 (3000 m) Altitude. Izy koa voatondro fa ny fipetrahana mbola fitaovana napetraka tao amin'ny fiaramanidina / fipetrahana toerana, ny elatra mikopaka ho nampidininy 15 ambaratonga, ary ny efitra foana unpressurized. Copilot William Rataczak nilaza Cooper fa ny isan-karazany ny fiaramanidina dia voafetra ho 1.000 kilaometatra eo ho eo (1600 km) eo ambanin'ny fiaramanidina voatondro fanahafana, izay midika fa ny faharoa refueling ho ilaina alohan'ny hidirana Meksika. Cooper sy ny mpiasa noresahina safidy ary nanaiky tamin'ny Reno, Nevada, tahaka ny refueling nijanona. Farany, nasain'i Cooper fa ny fiaramanidina hanala ny aoriana fivoahana varavarana misokatra sy ny tohatra omena. Northwest ny birao nanohitra an-trano, tamin'ny antony fa tsy azo antoka ny hanala ny aft tohatra napetraka. Cooper countered fa azo antoka tokoa, fa tsy nety hifamaly ny hevitra; izy no hampidina izany ny tenany indray mandeha izy ireo mahazo haavo.
An Faa manam-pahefana nangataka ny tava-tava fivoriana tamin'i Cooper sambo ny fiaramanidina, izay nandà. Ny dingana refueling dia nahemotra noho ny zavona ihany hidin-trano eo amin'ny solika ny pumping sambo kamiao rafitra, ary Cooper lasa niahiahy; fa navelany solony sambo kamiao mba hanohy ny refueling-ary ny fahatelo taorian'ny nihazakazaka faharoa maina.
Miverina eny amin'ny rivotra
Boeing 727 miaraka amin'ny aft airstair malalaka
Tamin'ny 7:40 ora hariva eo ho eo ny 727 ihany no nanala amin'ny Cooper, mpanamory Scott, fiaramanidina Mucklow, copilot Rataczak, ary fiaramanidina injeniera H. E. Anderson sambo. Roa mpiady F-106 Nihazakazaka avy teo akaiky teo fiaramanidina Air Force McChord Base nanaraka ambadiky ny fiaramanidina, ny iray ambony io ary ny iray etsy ambany, avy Cooper ny fomba fijery. A Lockheed T-33 mpampiofana, ka naviliny lalana avy amin'ny tsy misy ifandraisany Air National Guard asa fitoriana, ny 727 ihany koa shadowed mandra-nihazakazaka kely amin'ny solika ary niverina akaikin'ny Oregon-panjakana California tsipika.
Rehefa avy nilaza ny fiaramanidina Cooper Mucklow mba hanatevin-daharana ny sisa ny tantsambo tao amin'ny cockpit ary mijanona ao amin'ny nihidy ny varavarana. Rehefa Nanaiky izy, Mucklow nandinika Cooper famatorana zavatra tamin'ny valahany. Tamin'ny ora alina eo ho eo 8:00 fampitandremana hazavana nanjelanjelatra tao amin'ny cockpit, Midika izany fa ny aft airstair fitaovana efa mampandeha. Ny tantsambo ny tolotra ny fanampiana amin'ny alalan'ny fiaramanidina ny rafi-telefaonina dia curtly tsy nety. Ny tantsambo subjective ela dia nahamarika fiovana ny rivotra fanerena, Midika izany fa ny aft varavarana taratasy mivelatra koa.
Tamin'ny 8:13 ora hariva eo ho eo ny rambony ny fiaramanidina fizarana nanohana ny hetsika miakatra tampoka, manan-danja ampy mitaky trimming mba hitondra ny fiaramanidina indray ny ambaratonga sidina. Tamin'ny 10:15 PM eo ho eo Scott sy Rataczak niantsona ny 727, miaraka amin'ny aft airstair mbola napetraka amin'ny Reno seranam-piaramanidina. Mpiasan'ny FBI,-panjakana troopers, mpitandro filaminana ny solombavam-bahoaka, ary Reno polisy nanodidina ny fiaramanidina, araka ny mbola tsy tapa-kevitra tsara fa tsy nisy intsony Cooper sambo; fa mitam-piadiana fikarohana haingana nanamafy fa dia lasa izy.
Ambony sambo ny fiaramanidina mpiasan'ny FBI 66 indray tsy fantatra ny dian-tanana miseho, ny mainty Cooper Clip-on tie aman-dreny ny perla tie le clip, ary ny roa amin'ny efatra parachutes, iray amin'ireo izay efa nisokatra sy rakotra roa andalana tapaka hiala amin'ny eloelo. Nahita maso any Portland, Seattle, sy Reno, ary ireo rehetra izay manokana Cooper nifandray tamin 'ireo tafa sy dinika. Nisy andianà sketches ankapobeny dia nitombo.
An-toerana ny polisy sy mpiasan'ny FBI avy hatrany nanontany azo atao ahiahiana. Ny iray voalohany dia ny Oregon lehilahy miaraka amin'ny tsy ampy taona firaketana polisy atao hoe D. B. Cooper, nifandray ny Portland polisy ny eny-vintana fa efa nampiasa ny hijacker ny tena anarany, na ny antsoina ihany tao amin'ny heloka bevava teo aloha. Ny fandraisany anjara tamin'ny nifehy haingana avy; fa ny kely saina fanompoana tariby mpanao gazety (Clyde Jabina ny UPI ankamaroan'ny tantara, Joe Frazier ny AP hafa), nihazakazaka hitsena ny mananontanona fetra farany, nampifanaritaka ny nanafoana ny anaran'ny voarohirohy amin'ny solon'anarana ampiasain'ny hijacker. Ny fahadisoana dia naka ka namerina ny maro hafa loharanom-baovao, ary ny moniker "D. B. Cooper" nanjary nitoetra tao amin'ny vahoaka ny tsiaro.
Ny fanentanana ny 727 ny aoriana airstair, naparitaka teo nandositra. Ny hery misintona-niasa fitaovana misokatra foana mandra-pahatongan'ny fiaramanidina niantsona. (Click to view sarimiaina)
Ny marina faritra fikarohana Sarotra ny mamaritra, na dia kely toy ny fahasamihafana eo amin'ny vinavina ny fiaramanidina ny hafainganam-pandeha, na ny tontolo iainana eny amin'ny fiaramanidina fepetra lalana (izay Niovaova be ny toerana misy azy sy ny haavo), nanova ny kasaina Cooper fipetrahana hevitra be. Ny zava-dehibe miova ny lavany fotoana dia nijanona tao maimaim-poana lavo alohan'ny hisintonana ny Mandria am-piadanana-tady tokoa izy raha nahavita fanokafana ny elon'aina amin'ny rehetra. Tsy ny Air Force mpanamory mpiady nahita na inona na inona fivoahana ny fiaramanidina, na maso, na amin'ny Radar, ary tsy mahita ny elon'aina misokatra; fa amin'ny alina, amin'ny tena voafetra hisongadina sy ny rakotra rahona nanafina misy jiro tany ambany, dia mahazo haavo olo-malaza olombelona mitafy akanjo mainty tanteraka in afaka mora foana efa tratra. Ny T-33 mpanamory tsy nanao sary nifandray tamin'ny 727 amin'ny rehetra.
Ny fanandramana fanavaozana no nitarika ny fampiasana fiaramanidina ihany Cooper keriny avy ao amin 'ny fiaramanidina fanahafana, piloted ny Scott. Mpiasan'ny FBI, manosika ny 200-kilao (91 kg) sled avy amin'ny misokatra airstair, dia afaka miteraka ny miakatra mihetsika ny rambony fizarana resahin'ny ny fiaramanidina naneno amin'ny 8:13 PM. Nalaina avy tamin'ny fanandramana izany, dia nanatsoaka hevitra fa 8:13 PM no tena mety Hanketo fotoana. Tamin'izay fotoana izay ny fiaramanidina dia nanidina ny mavesatra oram-baratra ny Lewis River any amin'ny faritra atsimoandrefan'i Washington.
Extrapolations voalohany napetraka ny fipetrahana Cooper faritra ao anatin'ny faritra iray eo amin'ny farany atsimo fitoriana ny Tendrombohitra St. Helens, kilaometatra vitsivitsy any atsimoatsinanan'i Ariel, Washington, akaikin'ny Lake Merwin, artifisialy farihy namorona ny tohodrano amin'ny Reniranon'i Lewis. Search ezaka nifantoka tamin'ny Clark sy Cowlitz fivondronana, mahafaoka ny lalana avy hatrany atsimo sy avaratra, tsirairay avy, avy amin'ny Reniranon'i any atsimoandrefan'i Lewis Washington. Mpiasan'ny FBI sy ny mpitandro filaminana ny lefiny avy ireo fivondronana lehibe nikaroka faritra be tendrombohitra tany foana an-tongotra sy ny helikoptera. Door-trano fisavana ny eo an-toerana ihany koa farmhouses notanterahina. Fikarohana antoko hafa nihazakazaka fisafoana sambo niaraka Lake Merwin sy Yale Lake, ny fitahirizana avy hatrany ho amin'ny atsinanana. Tsy misy soritry ny Cooper, na ny fitaovana heverina fa nandao ny fiaramanidina aminy, hita.
Ny FBI ihany koa ny ambany fandrindran'ny ny avy eny ambony fikarohana, mampiasa raikitra-elatra fiaramanidina sy ny angidimby avy any Oregon tafika National Mpiambina, nanaraka ny manontolo sidina lalana (fantatra amin'ny anarana hoe Victor 23 ao amin'ny fitsipika fiaramanidina voambolana, fa "Vector 23" ao amin'ny ankamaroan'ny Cooper boky sy gazety) avy any Seattle ho Reno . Raha maro torotoro ambony hazo sy ny maro tapa-plastika sy ny zavatra hafa mitovy elon'aina canopies dia nahatsinjo sy fanadihadiana, na inona na inona manan-danja ny fijirihana hita.
Tany am-piandohan'ny 1972, fotoana fohy taorian'ny lohataona Thaw, ekipa ny FBI mpiasa nanampy ny 200 tafika miaramila avy any Fort Lewis, miaraka amin'ny Air Force manokana, National Guard miaramila, ary sivily mpiasa an-tsitrapo, nitarika iray hafa lalina tany fikarohana ny Clark sy Cowlitz fivondronana ny valo ambin'ny folo andro tamin'ny Martsa, ary avy eo fanampiny andro valo ambin'ny folo tamin'ny volana Aprily. Electronic Explorations Company, dia an-dranomasina Fanantazana mafy orina, nampiasa ny sambo mpisitrika hitady ny 200-tongotra (61 m) lalina ny Lake Merwin. Ny vehivavy ao an-toerana roa tafintohina teo amin'ny taolana amin'ny rafitra intsony ao Clark County; taty aoriana dia fantatra ho toy ny sisa tavela ny vehivavy tanora izay efa nalaina an-keriny, ary namono herinandro maromaro talohan'ny. Amin'ny farany, ny fikarohana asa-arguably be indrindra, ary ny mafy, ao amin'ny U.S. tantara-tsy manan-danja ara-nofo nanesorany porofo mifandray amin'ny fijirihana.
Tatỳ aoriana fandrosoana
Manaraka fandalinana atao hoe tany am-boalohany faritra fipetrahana tombana ho fanontaniana: Scott, izay nanidina ny fiaramanidina noho ny Cooper tanana ny hafainganam-pandeha sy ny haavo fangatahana, tatỳ aoriana, fa tapa-kevitra ny sidina lalana dia be lavitra noho ny tamin'ny voalohany Nihevitra atsinanana. Fanampiny angona avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany-in indrindra Continental Airlines mpanamory Tom Bohan, izay manidina efatra minitra ao ambadiky Flight 305-voalaza fa ny rivotra factored tari-dalana ho mitete faritra kajikajy efa diso, angamba amin'ny alalan'ny araka 80 degre. Izany ary ny hafa nanolo-kevitra angona fanampiny fa ny tena indray mitete dia angamba faritra atsimo-atsimoatsinanan'i tombantombana tany am-boalohany, ao amin'ny faritra drainage ny Washougal River.
"Tsy maintsy hiaiky," hoy ny nosoratan'i efa misotro ronono FBI lehiben'ny naman'ny Fiangonana Ralph Himmelsbach ao amin'ny 1986 boky, "raha [dia] handeha hitady an'i Cooper, aho doha ho amin'ny Washougal." Ny Washougal Valley sy ny manodidina no nitady imbetsaka amin'ny olona sy ny vondrona tsy miankina amin'ny taona manaraka; ny daty, tsy hitan'ny mivantana traceable ny fijirihana no tatitra.
Search for vidim-panavotana-bola
Tamin'ny faran'ny 1971 ny FBI nizara lisitry ny ny vidim-panavotana serial isa ny fikambanana ara-bola, trano filokana, foko lalamby, na fivarotana hafa zatra mitarika goavana vola varotra, sy ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna manerana izao tontolo izao. Northwest Orient nanolotra valisoa ny 15 isan-jato ny vola sitrana, ny faratampony ny $ 25.000. Tany am-piandohan'ny 1972 U.S. Fampanoavana John Mitchell namoaka ny serial isa amin'ny ankapobeny. Tamin'ny 1972 ampiasaina roa lahy sandoka vola taratasy 20 dolara natao pirinty tamin'ny Cooper serial isa fisolokiana $ 30,000 avy amin'ny gazety Herinandrom-baovao atao hoe Karl Fleming ho takalon'ny tafa sy dinika tamin'ny olona izy ireo nilaza lainga dia ny hijacker.
Tany am-piandohan'ny 1973, ny vidim-panavotana vola mbola tsy hita, ny Oregon Journal navoaka ny serial isa ka nanatitra $ 1,000 ho olona voalohany mba hitodika amin'ny vidim-panavotana volavolan-dalàna ho amin'ny gazety na an-tsaha FBI birao. Ao Seattle, ny Post-Intelligencer nanao toy izany koa tolotra amin'ny $ 5,000 valisoa. Ny tolotra nijanona tao mandra-kery fisaorana 1974, ary na dia nisy maro akaiky-lalao, tsy tena volavolan-dalàna hita. Tamin'ny 1975 ny insurer Northwest Orient, Global onitra Co., nanaraka baiko avy amin'ny Fitsarana Tampony Minnesota, ary nandoa ny fiaramanidina ny $ 180.000 milaza ny vidim-panavotana vola.
Fifanakalozan-kevitra tamin'ny 1976 nitsangana ny mananontanona lany ny lalàna ny famerana ny fijirihana. Indrindra namoaka fanadihadiana ara-dalàna nanaiky fa mety ho fahasamihafana kely, toy ny hevitry ny lalàna Miovaova arakaraka be avy raharaha ny raharaha sy ny fitsarana ny fitsarana, ary ny mpampanoa lalàna afaka milaza fa efa narian'i Cooper famelan-tsazy tamin'ny misy ny antony maro manan-kery ara-teknika. Ny fanontaniana dia nadika moot tamin'ny Novambra, rehefa lehibe ny Portland mpitsara niverina ny fanamelohana fitsarana tsy natrehiny manohitra "John Doe, aka Dan Cooper" ny rivotra piraty sy ny fanitsakitsahana ny Hobbs Act. Ny fiampangana tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny fanenjehana izay azo nanohy, dia tokony ho ny hijacker nosamboriny, na oviana na fotoana amin'ny hoavy.
Tamin'ny 1978 ny takelaka ahitana toromarika ho fampidinana ny aft tohatra ny 727 no hita avy ny diera mpihaza akaikin'ny fitrandrahana ala lalana tokony ho 13 kilaometatra (21 km) atsinanan'i Castle Rock, Washington, tsara avaratr'i Lake Merwin, nefa ny ao anatiny ny fototry ny lalan'ny Flight 305.
Ampahany Brian ny 1980 Ingram hita
Tamin'ny Febroary 1980 ny valo taona zazalahy atao hoe Brian Ingram, sasatra miaraka amin'ny fianakaviany ao amin'ny Columbia River tokony ho 9 kilaometatra (14 km) ambany avy any Vancouver, Washington, ary 20 kilaometatra (32 km) atsimoandrefan'i Ariel, nanesorany telo fonosana ny ny vidim-panavotana vola, be rava fa mbola nafatotra ho amboarany amin'ny fingotra fatorana, raha raked ny fasika amoron'ny renirano mba hanorina ny afon-dasy. FBI teknisiana dia nanamafy fa ny vola tokoa ny ampahany amin 'ny vidim-panavotana-fonosana roa amby roa-polo ny 100 dolara vola taratasy tsirairay, ary ny fahatelo fonosam-90, nanao fandaharana rehetra ao mitovy mba toy ny rehefa nomena an'i Cooper.
Nanomboka ny fahitana vaovao maro fihodinana ny ampianarin'ny, ary farany nanangana olona maro kokoa noho ny namaly fanontaniana. Fanambarana voalohany ny naman'ny Fiangonana sy ny siansa mpanolo dia naorina teo amin'ny fiheverana fa ny nafatotra ho amboarany faktiora voasasa malalaka an-Columbia Reniranon'i avy amin'ny iray amin'ireo maro mampitohy nampanaovina fanompoana. An Tafika Corps ny injeniera hydrologist nanamarika fa efa rava ny volavolan-dalàna tao amin'ny "boribory" lamaody, ka dia niara-matted, milaza fa efa napetraka ny renirano ny asa, izay mifanohitra amin'ny rehefa niniana nalevina. Raha izany no izy, dia nanamafy fa tsy Cooper tafatody akaikin'ny Lake Merwin, na amin'ny zavatra hafa ny ampahany amin'ny Reniranon'i Lewis, izay mihinana eo an-Columbia ambany tsara avy amin'ny nahitana toerana; Ary nampindraminy nino fanampiny fanombantombanana (jereo ny fivoaran'ny toe-draharaha taty aoriana etsy ambony) mametraka ny rano indray mitete faritra akaikin'ny Reniranon'i Washougal, izay merges amin'ny Columbia manokana eo ambony avy nahitana toerana.
Fa ny "maimaim-poana mitsinkafona" petra-kevitra dia nanolotra ny tenany olana; dia tsy manazava ny volavolan-dalàna iray avy amin'ny iray fonosana tsy ampy, tsy dia nisy antony lojika fa ny telo fonosana ho naharitra niaraka rehefa nanasaraka avy any amin'ny sisa amin'ny vola. Ara-batana dia tsy mifanaraka amin'ny porofo Niforona porofo: Himmelsbach nahita fa maimaim-poana-mitsingevana amboara ho nahita hanasa ny amin'ny banky "ao anatin'ny roa taona" ny fijirihana; raha izany, ny fingotra fatorana ho lava hatramin'ny niharatsy, ny fandinihana nanamafy tamin'ny andrana amin'ny alalan'ny fikarohana ny Cooper Team (jereo ny Mitohy ny fanadihadiana eto ambany). Niforona porofo soso-kevitra, na izany aza, fa ny volavolan-dalàna tonga tao amin'ny faritra ny nahita-amoron-dranomasina antsoina hoe Tina anoloan'ny (na Tena) Bar-tsara taorian'ny 1974, ny taona ny Corps ny injeniera asa fanadiovana y asa tamin'io mihinjitra amin'ny ony. Mpandinika ny nofon-Leonard Palmer ny Portland State University nahita miavaka tsara roa sosona ny fasika sy antsanga eo amin'ny tanimanga napetraka teo amoron'ny ony ny dredge sy ny fasika sosona izay no nalevina ny vola taratasy, ny volavolan-dalàna Midika izany fa tonga ela taorian'ny asa fanadiovana y efa vita. Ny Cooper Research Team tatỳ aoriana ny famaranan fanamby Palmer, mitanisa porofo fa ny tanimanga sosona ireo mipetraka voajanahary. Izany fitadiavana, Raha toa ka marina, miandany amin'i ho tonga fotoana latsaka herintaona taorian'ny hetsika (mifototra amin'ny ny fingotra tarika andrana), nefa tsy manampy ny hanazava ny fomba amboara tonga Tina Bar, na avy aiza dia tonga.
Teoria maro hafa no nandroso. Ny sasany nandefa vinavina sarotra hamarinina fa ny vola efa ao amin'ny toerana lavitra ny olona iray (na mety na dia ny bibidia), nentina ho any amin'ny ony banky, ka reburied teo. Ary nisy ihany koa ny mety ny vola izay efa hita teo amin'ny amoron'ny renirano tany aloha, angamba talohan'ny ny asa fanadiovana y, ka nalevina tao amin'ny endrika ivelany fotsiny sosona fasika amin'ny manaraka. Ny mpitandro filaminana ny Cowlitz County Angatahina Cooper nahy latsaka vitsivitsy ny amboara teo amin'ny airstair, izay eny dia nitsoka ny fiaramanidina rehefa nitsambikinany dia niankohoka tao an-Columbia River. Gazety ao an-toerana iray mpampanonta-pahaizana fa Cooper, satria fantany fa tsy afaka mandany ny vola, dumped azy tao amin'ny ony, na nandevina azy teo (ary mety any an-kafa) ny tenany. Tsy misy petra-kevitra natolotra ny daty po manazava rehetra ny efa misy porofo.
Tamin'ny 1981 karandohany olombelona no nofongarina koa amoron'ny renirano manamorona ny fihadian-tany nandritra ny mba hitady porofo fanampiny. Nanoritra pathologists farany tapa-kevitra fa an'ny vehivavy, angamba ny Indianina any Amerika razambeny.
Tamin'ny 1986, rehefa maharitra ho fifampiraharahana, ilay sitrana dia nizara vola mitovy eo Ingram sy Avaratra Orient ny insurer; ny FBI nihazona 14 ohatra toy ny porofo. Ingram nivarotra dimy ambin'ny folo ny faktiora amin'ny lavanty tamin'ny taona 2008 ho eo amin'ny $ 37.000. Hatramin'izao, tsy misy ny 9.710 sisa tavela dia avadika vola na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny serial isa mbola azo jerena amin'ny aterineto ho an'ny besinimaro fikarohana.
Tamin'ny 1988 ny ampahany ny elon'aina natsangana tamin'ny ambany ny mihinjitra ihany ny Columbia River, fa manam-pahaizana FBI tapa-kevitra fa tsy afaka ny ho Cooper. Tamin'ny 2008 ny ankizy nofongarina elon'aina iray hafa akaikin'ny Amboy, Washington, tokony ho 6 kilaometatra (9.7 km) noho atsimon'i Lake Merwin, izay hita ho ny Ady Lehibe II-vanim-potoana ara-tafika io. Ny Columbia River vola vidim-panavotana sy ny fampianarana airstair takelaka hijanona ihany fide Bona porofo ara-batana avy amin'ny fijirihana mbola hita ivelan'ny fiaramanidina.
Manaraka FBI ampamoaka
Tamin'ny faran'ny 2007 ny FBI dia nanambara fa ny ampahany ADN profil efa azo avy telo organika santionany hita eo amin'ny hijacker ny Clip-on tie tamin'ny 2001, na dia taty aoriana niaiky fa tsy misy porofo fa ny hijacker dia ny loharanom-ny santionany fitaovana. "Ny tie nanan-janaka roa santionany kely ADN, ary ny iray santionany lehibe," hoy Special Agent Fred Gutt. "Sarotra ny hanatsoaka hevitra hentitra avy amin'ireo santionany." Ny Birao ampahibemaso koa ny antontan ny teo aloha unreleased porofo, anisan'izany ny 1971 Cooper tapakila fiaramanidina avy any Portland ho any Seattle (vidiny: $ 18,52 miampy hetra, fitambaran'ny $ 20.00, mandray karama ao amin'ny vola).
Izy ireo ihany koa ny nampahafantatra fa Cooper nifidy ny zokiny amin'ny Kilonga roa parachutes Nanome taminy, fa tsy ny ara-teknika fanatanjahantena matihanina ambony elon'aina; fa hatry ny roa piarovana parachutes, dia nifidy ny "dummy" tsy azo nampiasaina intsony -barotra vondrona miaraka amin'ny inoperative ripcord natao ho dakilasy fihetsiketsehana, na dia nisy marika famantarana mazava izany akory toy ny tsy za-draharaha skydiver-asany. (Izy cannibalized ny hafa, asany piarovana elon'aina, mety mampiasa ny shrouds mba afehezo amin'ny vola kitapo hanidy, ary mba hahazoana ny kitapo ho any ny tenany araka ny ambaran'ny Mucklow.) Ny FBI Nanantitrantitra fa ny fampidirana ny dummy piarovana elon'aina, iray amin'ireo efatra nahazo faingana avy amin'ny Seattle skydiving sekoly, dia tsy nahy. Ankoatra ny sampan-draharaha teo aloha unreleased namoaka ny ankapobeny sketches sy ny zava-misy fanitso, niaraka tamin'ny fangatahana ho amin'ny ankapobeny ho an'ny vaovao izay mety hitarika ho Cooper famantarana ny tsara.
Tamin'ny Martsa 2009 ny FBI nampahafantatra fa Tom Kaye, ny paleontologist avy amin'ny Burke Museum ny Fandinihana Zavaboary sy ny Kolontsaina ao Seattle, dia namory ny ekipa ny "olom-pirenena sleuths" anisan'izany ny mpahay siansa sary nataon'i Carol Abraczinskas sy metallurgist Alan Stone. Ny vondrona, fantatra ankehitriny hoe ny Cooper Research Team, dia mampiasa ny teknolojia Tsy vonona tamin'ny 1971 mba reinvestigate singa manan-danja ny raharaha. Amin'ny alalan'ny fampiasana GPS sy zanabolana sary, dia miezaka mba hamaritana raha toa ny vola ao amin'ny Ingram malalaka nitsinkafona ho any amin'ny toerana nahitana rehefa mandeha ny fotoana, na hita tany an-kafa ary reburied. Efa reexamined ny 727 ny sidina lalana avy any Seattle mba Reno ny marimarina kokoa maminavina ny fipetrahana Cooper faritra. Mampiasa elektronika microscopy izy ireo nandinika ny poti-jatony tao amin'ny Cooper ny tie, famantarana Lycopodium spores (azo inoana fa avy amin'ny fanafody vokatra), ary ny sombintsombin'ny bismuth sy ny aluminium.
Tamin'ny Novambra 2011 Kaye nanambara fa poti ny madio (unalloyed) titane ihany koa no hita eo amin'ny kravaty. Nohazavainy fa titane, izay saro-tadiavina be tamin'ny taona 1970 noho ny amin'izao anio izao, hita tamin'izany andro izany ihany amin'ny famokarana vy FABRICATION na trano, na amin'ny orinasa simika mampiasa azy io (miaraka aluminium) mba hitahiry tena manimba tsikelikely akora. Ny hita soso-kevitra, hoy izy: fa Cooper Mety ho mpahay simia na metallurgist, na angamba ny injeniera na ny mpandrindra (hany mpiasa izay nisalotra fifandraisana toy izany trano tamin'izany fotoana izany) amin'ny metaly na simika orinasa mpamokatra entana fototra, na amin'ny orinasa izay sitrana korontam-by avy ireo karazana orinasa.
Teoria sy ny conjectures
FBI Sketch ny Cooper, amin'ny taona fivoarana
Tamin'ny taona nanomboka ny fijirihana ny FBI dia tsindraindray nanao ampahibemaso ny sasany amin'ireo petra-kevitra sy ny asa vonjy maika hevitra momba ny raharaha, nalaina avy vavolombelona fijoroana ho vavolombelona sy ny zara raha misy porofo ara-batana.
Ny famaritana ara-batana ofisialy mbola niova ary heverina ho azo antoka. Flight mpanompony Schaffner sy Mucklow, izay nandany ny ankamaroan'ny fotoana Cooper, dia nitafatafa tamin'ny tamin'iny alina iny tanàna natokana, ka nanome efa ho mitovy famaritana: 5 tongotra 10 santimetatra (1.78 m) ny 6 tongotra 0 santimetatra (1.83 m) ny haavony, 170 ny 180 kilao (77 ny 82 kilao), tapaky ny volana-40s, amin'ny akaiky-hametraka manindrona volontsôkôlà maso. Mpandeha sy ny nanatri-maso nanome famaritana tena mitovy.
Agents mino fa Cooper dia tsara ny Seattle faritra sy mety ho ny Air Force menavazana, mifototra amin'ny fijoroana ho vavolombelona fa nahafantatra ny tanànan'i Tacoma avy ny rivotra toy ny fiaramanidina nasianao boribory Puget Sound, ary ny marina fanehoan-kevitra ho Mucklow fa McChord Air Force Base dia eo ho eo amin'ny 20 minitra 'ny fotoana fiara avy amin'ny Seattle-Tacoma Airport-a tsipiriany ny ankamaroan'ny olon-tsotra tsy mahalala, na ny fanehoan-kevitra teo. Ny toe-javatra ara-bola dia azo inoana fa tena mamoy fo, tahaka ny extortionists sy ny olon-dratsy be dia be mangalatra vola efa ho foana ny manao izany, araka ny manam-pahaizana, satria mila izany maika dia maika; Raha tsy izany, ny heloka bevava dia tsy mendrika ny be mety. (Ny hevitry ny vitsy an'isa dia ny hoe Cooper dia "ny fientanam-po mpitady" izay nanao ny Hanketo "fotsiny mba hanaporofoana fa azo atao.")
Agents milaza fa dia naka ny antsoina avy amin'ny boky tantara an-tsary malaza Belza andiana ny taona 1970 mampiseho ny noforonina mahery fo Dan Cooper, ny Royal Air Force Canadian fitsapana mpanamory fiaramanidina, izay nandray anjara tamin'ny maro feno herim-po niainany, anisan'izany ny parachuting. (Iray fonony avy amin'ny andian-dahatsoratra, volen'ny ao amin'ny FBI Internet, mampiseho fitsapana mpanamory Cooper skydiving tanteraka paratrooper regalia.) Noho ny Dan Cooper Comics no tsy nadika ho amin'ny teny Anglisy na nafarana ho any Etazonia, dia manombantombana fa mety ho tojo azy ireo nandritra ny fitsidihana ny adidy any Eoropa. Tom Kaye ny Cooper Research Team (jereo ny Mitohy ny fanadihadiana) dia nanoro hevitra ny hafa fa mety Cooper dia Kanadianina, ka nahita ny Sariitatra any Kanada, izay izy ireo koa dia namidiny. Mariho manokana ireo ny fangatahana ho an'ny "negotiable Amerikana vola", ny andian-teny mahalana raha mbola ampiasain'ny olom-pirenena Malagasy; satria vavolombelona nilaza fa tsy nanana distinguishable Cooper lantom-peony, Kanada ho ny tena mety FIRENENA raha tsy ny olom-pirenena Amerikana.
Ny asa FBI hery dia mino fa Cooper dia tsara sy mahira-tsaina Planner. Ary nangataka efatra parachutes mba hanery ny fiheverana fa mba hanery ny iray na mihoatra takalon'aina mba nitsambikina aminy hoe: Izao no antoka izy fa tsy fanahy iniana amin'ny nisompatra namatsy fitaovana. Nifidy ny fiaramanidina 727-100 satria tsara ho onitra-avy afa-mandositra, noho tsy ny ny aft airstair, fa koa ny avo, aftward fametrahana ny fitaovana rehetra telo, izay namela ny ara-drariny azo antoka nitsambikina avy hatrany tsy misy atahorana ny fandoroana ny fiaramanidina Exhaust. Nisy "single-teboka manao izay hampisy" fahaizany, ny zava-baovao vao haingana izay namela fiara mifono vy rehetra mba ho refueled haingana amin'ny alalan'ny solika seranan-tsambo iray. Izany koa nanana ny fahaizana (tsy mahazatra ho an'ny ara-barotra fiaramanidina fiaramanidina) mba mitoetra ao miadana, ambany-Hauteur fiaramanidina tsy stalling; ary Cooper nahalala ny fomba hifehezana ny rivotra sy ny hafainganam-pandeha Altitude tsy miditra ny cockpit, izay azony no resin'ny ny telo mpitondra sambonao. Fanampin'izany, Cooper dia zava-dehibe tsara tsipiriany, toy ny mety sisiny fametrahana ny 15 degre (izay tsy manam-paharoa izany voromby), ary ny mahazatra refueling fotoana. Fantany fa ny aft airstair azo nampidinina mandritra ny fiaramanidina-ny zava-misy tsy nampahafantatra ny sivily fiaramanidina Crews, satria tsy nisy toe-javatra amin'ny mpandeha fiaramanidina izay mety ho tsy maintsy-ary ny fandidiana, amin'ny alalan'ny iray monja jiro ao aoriana ny trano fialan-tsasatray, tsy azo toherina amin'ny cockpit. Mety mihitsy aza ho fantany fa ny Central Intelligence Agency efa nampiasa 727s handao mpiasa sy ny entana ao ambadiky ny andalana fahavalo nandritra ny ady tany Vietnam.
Ny tena nitandrina Cooper drafitra koa no omena ny fotoana ny asa, ary na dia ny safidy ny akanjo, araka ny fikarohana Kaye ny ekipa. "Ny FBI nitady, fa tsy nahita na iza na iza, izay nanjavona ny faran'ny herinandro," Kaye nanoratra, milaza fa mety ho ny niharamboina fotsiny niverina ho any amin'ny ara-dalàna asa. "Raha nikasa ny handeha 'hiverina hiasa ny alatsinainy', dia mila fotoana betsaka araka izay azo atao mba avy amin'ny ala, mahita fitaterana sy hahazo an-trano. Ny fotoana tsara indrindra fa izany no eo anoloan'ny iray four- andro faran'ny herinandro, dia ny fotoana Dan Cooper nifidy noho ny heloka bevava. " Ankoatra izany, "raha niomana izy aloha, dia fantany fa tsy maintsy afaka mipetraka avy amin'ny ala, ka be dia mora kokoa ny mahazo naka tao amin'ny palitao sy kravaty noho ny taloha pataloha jeans manga."
Na dia teo aza ny fanaovana drafitra sy ny tsara tsara ny tsipiriany, ny birao mafy mahatsapa fa zava-dehibe skydiving Cooper nanana fahaiza-manao sy ny traikefa. "Nihevitra izahay tany am-boalohany i Cooper jumper za-draharaha, na dia ny paratrooper angamba," hoy Special Agent Larry Carr, mpitarika ny fanadihadiana ekipa hatramin'ny 2006. "namarana izahay rehefa afaka taona vitsivitsy izany dia tsy marina tsotra izao. Tsy misy za-draharaha parachutist ho nitsambikina in
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=D._B._Cooper&oldid=778630"
Voaova farany tamin'ny 16 Aprily 2016 amin'ny 09:57 ity pejy ity.